1. Maxaa lagama maarmaan u ah dubista Waxay siisaa aragti qurux badan oo midab leh Ku dar macaan dhadhanka ugu fiican Ma yahay sonkor sare Laakiin taas miyaad aaminsan tahay Sidee loo sameeyaa ubax yaase u maleyn lahaa inay wax fudud tahay, oo waxaad si fudud u soo qaadan kartaa dhammaan qalabka aad ku haysato gurigaaga, jikada, u isticmaal inaad ku xoqdo keegaaga si qurux badan oo aad uga faani karto taas. Waa geedi socod dhab ah oo guriga lagu sameeyo. In imtixaanka farxadda ama qof kasta oo raadinaya dakhli dheeri ah oo ka soo baxa dubista. Aynu u samayno si loo dhimo kharashyada isla waqtigaas si ka wanaagsan.
2. Waa maxay sonkorta miraha Dhab ahaantii waa sonkor soo martay habsocod wanaagsan. Muuqaalku waa budo cad Waxay kakoobantahay 3% galley galley ah waxaana loo isticmaalaa inay ka koobantahay walxaha dubista. Summad-wanaaggu waa wanaagsan yahay iyada oo aan lahayn shaabaddo haraaga ah. Sidoo kale waa isku dar ah kareemo lagu qurxiyo keegga, digaagga iyo samaynta caruusado si loogu qurxiyo macmacaanka si fiican. Ka sii muhiimsan, way fududahay inaad kaligaa sameysid, ka caawinta yareynta qiimaha iibsiga alaabta ceeriin. Si fudud loo helo, fudud in lagu sameeyo maaddooyinka soo socda:
3. Waxaa jira kaliya 3 maado oo laga heli karo guri kasta sameynta sonkorta shiidan: 150 garaam oo sonkor ah.
4. 11 kii garaam ee istaarijka galleyda iyo isku dar
5. Laga bilaabo sonkorta. Ku shub blender Ka dibna si fiican u wareejin Adoo isticmaalaya wakhti wareejin ah, oo aan dheerayn, qiyaastii 20-30 sekan
6. • Kadib hubi si aad u ogaato in sonkorta isku dhafan ay wanaagsan tahay iyo in kale. Haddii ay weli jiraan wax kiniin ah, mar kale miiqda. Ilaa ay fiicnaaneyso, waxay umuuqataa budo yar • Marka sonkorta si fiican loo isku daro. Kadib ku dar budada galleyda saamiga aan kor ku soo xusnay • Kadib sonkorta iyo budada galleyda ayaa isku dhafan. Labada walxo isku qas ilaa 10 ilbidhiqsi.
7. • Hubi inay maaddooyinka si fiican isugu dhafan yihiin iyo budada gacanta lagu ganaaxo. Waa la dhammeeyay. Kadibna ku kaydso weel xidhan. Si aad ugu isticmaasho fudayd
8. Ku dar macaan iyo diirimaad dhalaalaya guriga. Sababtoo ah cuntadu waxay khusaysaa xulashada maaddooyinka wanaagsan Haddii aan soo saari karno alaabta ceyriinka ah Ama lagu dabaqay cuntada aan ku sameynay guriga Marka lagu daro inaad leedahay dhadhan gaar ah Ogow asalka Waxay kaloo kaa caawinaysaa yareynta kharashka maxaa yeelay waa wax laga heli karo hareeraha xafladda dubista. Aynu samaysanno sonkor sonkor ah Qurxin keega ama keega laftooda Dadka wax cunaya ha ogaadaan macaanka aan danaynayno inay sidaa sameeyaan Sidoo kale waxaa lagu qariyay jacayl, daryeel iyo diirimaad Molikiyuul kasta oo nacnac ah in khamiisyada loo qurxiyo si qurux badan Ama ku martiqaadka carruurta inay caruusado samaystaan oo keega ka samaystaan ayaa ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada abuuraya xusuusta. Oo u dhoola cadee qoyska sidoo kale In ka badan macaan dhadhan fiican leh